Tag: IGAD | Sagal Radio Services
Madaxda dalalka xubnaha ka ah Urur Goboleedka IGAD ayaa laguu wadaa inay markii ugu horeysay ay magaalada Muqdisho ku qabtaan shir madaxeedkooda, tan iyo markiii ururkan la aasaasay 1986-kii.
Shir Madaxeedkii IGAD oo la sheegayo in maalmo uu dib u dhacay
Shir Madaxeedka IGAD ee qorshihiisa ahaa in 10-ka bishan oo ku beegan Sabtida uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in maalmo uu dib u dhacay.
Ergayga Midowga Afrika ee Somalia oo si Adag uga Hadlay weerarkii shalay ka dhacay Baydhabo
Ergeyga Midowga Afrika ee Arrimaha dalka Somalia Danjire Francisco Caetano Madeira ayaa si adag u cambaareeyay Qaraxyadii Baydhabo ka dhashay shalay gellinkii dambe, kuwaasoo ay ku naf-waayeen in ka badan 30-qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro kale oo badan.
IGAD oo soo dhoweysay doorashada Axmed Madoobe, kana digtay cid kasta oo carqaladeyneysa
Ergeyga Urur Goboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo shalay ka qeyb galay doorashadii ka dhacday Kismaayo ee Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in IGAD ay soo dhoweyneyso doorashadaas.
IGAD oo soo dhoweeysay magacaabista Xukuumada cusub, uguna baaqay Baarlamaanka inay ansixiyaan
Urur Goboleedka IGAD ayaa soo dhoweeyay magacaabista Xukuumada cusub ee Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, iyagoo sheegay inay la shaqeyn doonaan Xukuumada u dhalatay Soomaaliya.
Qaban qaabada soo dhoweynta wafdigii u horeeyay ee Wasiirada A. Dibada IGAD oo ka socota garoonka diyaaradaha
Qaban qaabo lagu soo dhoweynayo Wafdigii u horeeyay ee Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD ayaa ka socota garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo ammaanka wadada dheer ee isku xirta garoonka ilaa Madaxtooyada si aad ah loo adkeeyay.
IGAD”M/weynaha & Ra’iisul Wasaaraha Khilaafkooda ha xaliyaan
Wakiilka Urur Goboleedka IGAD Maxamed Cabdi Afeey oo maanta hadal ka jeediyay Shir ka furmay Magaalada Baydhabo ayaa Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Dalka ka dalbaday in ay xaliyaan Khilaafka u dhaxeeya islamarkaana si hoose loo xaliyo.
IGAD oo iska fogeysay War lagu daabacay Warbaahinta Soomaalida qaarkeed
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska wakiilka urur-goboleedka IGAD ee Muqdisho, Jamaal Axmed Ibraahim ayaa lagu beeniyay war qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalidu ay baahiyeen, kaasoo ku saabsanaa in xafiisku uu wado qorshe uu madaxtooyada Somalia ku geliyo hub sharci-darro ah.
Madaxda IGAD oo ku hanjabay in tallaabo ay qaadayaan haddii si dhaqso ah aan lagu joojin Colaadda Koonfurta Suudaan
Madaxda dalalka urur goboleedka IGAD oo kulan ku yeeshay Nairobi Jimcihii shalay ayaa ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabo aanay sheegin nooceeda haddii labada dhinac ee dagaalamaya aysan colaaddooda ku joojin muddo afar casho ah.
Madaxda IGAD oo ku kulmaya Nairobi
Kulan aan caadi ahayn oo looga hadlayo sidii xal loogu heli lahaa dagaallada ka socda dalka Koonfur-Sudan ayaa lagu wadaa in maanta oo Jimco ah ay magaalada Nairobi ku yeeshaan madaxda urur-goboleedka IGAD.
IGAD "Maamul u sameynta Soomaaliya, hallooga dambeeyo dowladda"
Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee IGAD oo kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa waxay ku go'aansadeen in dowladda Somalia ay qabato shir deg-deg ah oo oo loogu yeerayo dhammaan qaybaha ay quseyso ee ku nool gobollada Jubbooyinka, si shirkaas uu uga soo baxo Road-map lagu dhisayo maamul KMG ah oo laga hirgeliyo Jubbooyinka.
Wafdi IGAD ka socdey oo shalay Muqdisho madax kula kulmay, maanta Kismaayo aadaya
Wafdigii ka socday urur-goboleedka ee ku sugnaa Muqdisho ayaa lagu wadaa inay maanta gaaraan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ay ka billaabi doonaan howl ay ku indho-indheynayaan xaaladda ka jirta magaaladaas.